IATA: Nkwekorita ikuku nke Jordan-Israel ga-echekwa mmanu na oge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » IATA: Nkwekorita ikuku nke Jordan-Israel ga-echekwa mmanu na oge
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) nabatara nkwekọrịta nkwekọrịta overflight na-adịbeghị anya n'etiti alaeze Jọdan na mba Israel nke na-enye ohere maka ụgbọ elu gafere ikuku mba abụọ ahụ. Nkwekorita ahụ meghere ụzọ maka ụgbọ elu azụmahịa iji nwee ike ifefe n'okporo ụzọ Israel-Jọdan-nke ga-eme ka oge ụgbọ elu belata, belata mmanụ ọkụ na nsị CO2.
Gbọ elu na akụkọ ihe mere eme gbara gburugburu Israel mgbe ha na-efe ọwụwa anyanwụ / ọdịda anyanwụ na-arụ ọrụ na mbara ikuku Middle East. Zọ a na-agbatị site na ọdụ Jọdan na Israel ga-egbutu kilomita 106 na ọwụwa anyanwụ na 118 kilomita ọdịda anyanwụ na ụgbọ elu na-arụ ọrụ site na Gulf States na Asia gaa ebe na Europe na North America.
Dabere na ọnụọgụ ọdụ ụgbọ elu ndị ruru eru, nke a ga-eme na ịchekwa ụbọchị 155 nke oge ị na-efe efe kwa afọ yana mbelata kwa afọ nke ikuku CO2 nke ihe dị ka tọn 87,000. Nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala ndị njem 19,000 na-ewepụ n'okporo ụzọ ruo otu afọ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ elu ndị ruru eru abawanye, na okporo ụzọ erute ọkwa ọkwa pre-COVID-19, nsonaazụ ahụ ga-abụ nchekwa nke ụbọchị 403 nke oge na-efe efe kwa afọ yana mbelata kwa afọ nke ikuku CO2 nke ihe dịka 202,000 tọn. Nke a na ịnwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala 44,000 n'okporo ụzọ ruo otu afọ.
“Njikọ ikuku ikuku n’etiti Jọdan na Israel bụ ozi ọma maka ndị njem, gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ ụgbọelu, n’oge ndị a siri ike. Zọ a na-eme njem ga-ebelata oge njem maka ndị njem ihe dịka nkeji 20 ma belata ikuku CO2. Airlinesgbọ elu ga-echekwa ụgwọ mmanụ nke ga-enyere aka ka ha na-agba mbọ ịlanahụ nsogbu nke ọrịa ọrịa COVID-19, "Muhammad Al Bakri, onye isi oche mpaghara mpaghara IATA maka Africa na Middle East kwuru.
Ihe ndị na-arụ ọrụ nke nkwekọrịta ọhụrụ ahụ bụ nke ndị ọrụ ụgbọelu nke Jordan na Israel na-eduzi, nke Eurocontrol, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgbọelu na Europe, na IATA na-akwado.